Amerika'da İngilizce öğrenmek (Birmanya içinde WESLI hakkında bilgiler) | WESLI Amerika'da İngilizce öğrenmek (Birmanya içinde WESLI hakkında bilgiler) – WESLI
Beri İngilizce Öğretimi 1981
Yurt içinde Beklentileriniz neler
Bir WESLI Homestay Yaşam
Hayat @ WESLI
Faaliyetler ve Gönüllülük
Madison hakkında, Wisconsin
Başlangıç ​​- İleri Seviye
İş ve Mesleki Beceriler
UW Colleges / Akademik Program WESLI
Üniversite Başarı / Test Hazırlık
Ücretsiz İngilizce Uygulama / Yardım
Gymglish Çevrimiçi İngilizce
WESLI ve Üniversiteler
TOEFL Muafiyet Programı
WESLI at İlk İki Gün
Tarih ve Akreditasyon
Kurslar ve Değerlendirme
Kabul ve Öğrenim
Diğer WESLI Hizmetleri
WESLI İşyeri Hakkında
Mesleki İngilizce Öğretim
WESLI İşyeri İletişim
WESLI Çevrimiçi Ders
Gönüllü Konuşma Partneri
Amerika'da İngilizce öğrenmek (Birmanya içinde WESLI hakkında bilgiler)
OKUL PROFİLİ ကျောင်း သ မိုင်း အကျ ဉ်း
WESLI (Wisconsin İngilizce İkinci Dil Kurumu) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းြ ဖစ် သည်. အေ သး စိတ် သိ ရှိ လိုပါက WESLI ၏0က်ဘ်ဆိုက် လိပ် စာ www.wesli.com0erişilebilir.
Güvenli olması, çekici Güzel ve eğlenceli
WESLI တွင် အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံအဆင့်မှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့်အဆင့်ထိ level ၈ခုခွဲပြီး သင်ကြားပေးနေပါသည်။ (Numunenin sayfa6tabii WESLI, Bu yılki üniversite öğretim yılı sitede0"listesinde(Geçerli oturumu Kurs listesini)"Ya görebilirsiniz.) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို့) ၀က်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION (BABA): ပြည်ပကျောင်းသား ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့် (အိုစီအေ)
Yaklaşan WESLI Oturumları
WESLI Çevrimiçi İngilizce
Sizin Dil Bilgisi:
Arapça • Birmanyalı • Çin(Basitleştirilmiş) • Çin(Çince karakter) • İspanyolca • Fransız • Almanca • Japon • Kore • Portekizce • Rus • Tayland • Türkçe Vietnamca dil
19 N Pinckney St. Madison, WI 53703 USA Tel: 1-608-257-4300 Faks: 1-608-257-4346
Penner Web Tasarım Wordpress Geliştirme